I-Solstua, e-Hamar - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguSolfrid Sofia
USolfrid Sofia yi-Superhost
Bonke bamkelekile kwindawo yam! Uza kuba negumbi 😊 lakho kunye nebhedi encinci, entle, elala abantu ababini. Ibhafu nendlu yangasese kufuneka wabelane nam, ngamanye amaxesha nonyana wam. Ngelishwa, andizukwazi ukufikelela kwifriji nekhitshi ngeli xesha le-coronavirus. Kodwa kukho ii-boilers zamanzi, iibhegi zeti kunye nekofu ekhawulezayo egumbini. Ukutshaya okanye ukudika akuvumelekanga, kwaye andifuni ukuba ube neendwendwe egumbini lakho. Emva koko ndingathanda ukuba kuthule endlwini emva ko-11 ebusuku. Wamkelekile ! 😊
Indlu esedolophini ikwindawo ethe cwaka malunga neekhilomitha eziyi-3 ukusuka embindini wesixeko saseHamar. Inombolo yebhasi b21; yima "i-pine grove kindergarten", imizuzu eyi-5 yokuhamba ukusuka kwisikhululo sebhasi. Ukupaka kwindawo yokupaka yeendwendwe ezisebenzisanayo, ecaleni kweegaraji. Ukuba unemithwalo enzima, kunokwenzeka ukuba uqhube yonke indawo yokungena uze uyikhuphe, qaphela ukuba yindlela enye.
Ukuphuhliswa kwindawo ethe cwaka. ukujonga okulinganiselweyo kweMjøsa, indlela emfutshane ukuya elunxwemeni, kunye neendawo ezingabhatalelwayo ehlathini. Ivenkile yokutya: Umgama wemizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo ukuya kwiStorhamar Centre. Kukwakho nendawo yokutyela entle, i- "La Perla", ukutya okumnandi kunye nenkonzo entle.
Umbuki zindwendwe ngu- Solfrid Sofia
Amaxesha amaninzi, ndidibana neendwendwe, ndizinike izitshixo, ndize ndizibonise indawo, ngaphandle kokuba kuvunyelenwe ngenye indlela. Ndicinga ukuba kumnandi ukwazi abantu abatsha, kwaye ndiyakuvuyela ukuncokola xa ndifuna, kodwa ndixakeke kakhulu/ ndiphume, ngoko kuza kuba xa kufanelekile nobabini. 🙂
Amaxesha amaninzi, ndidibana neendwendwe, ndizinike izitshixo, ndize ndizibonise indawo, ngaphandle kokuba kuvunyelenwe ngenye indlela. Ndicinga ukuba kumnandi ukwazi abantu abatsh…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hamar